अब समृद्धि अनुभुति गर्ने गरी हुन्छ – Radio Hatemalo FM
प्रकाशित मितिः १ बैशाख २०७६, आईतवार ०७:५९ April 14, 2019 हातेमालो संवाददाता
बाँके । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ वर्ष २०७६ को अवसरमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नृभएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारबाट भएको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले वर्ष २०७५ कानुन निर्माण र समृद्धिको जग बसाल्ने वर्ष भएको बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारलाई गर्ने प्रश्नको शैली बदल्न सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ । उहाले सरकारले यो वर्ष केही काम गरेन, किन ? भन्ने प्रश्न गर्नुभन्दा पनि यो वर्ष सरकारले के के काम गर्‍यो ? तुइन बिस्थापन गरेर कति फाइदा भयो ? भनेर प्रश्न गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले २०७५ सालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको प्रतिफल आउन लागेको समेत बताउनु भयो ।
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि काम गरेको बताउनु भयो । उहाले मुलुकमा शान्ति स्थापनाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण काम भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
छुट्टै मधेश राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका सिके राउतलाई राजनीतिको मूल धारमा ल्याएको भन्दै अब भइरहेको हिंसालाई पनि छिट्टै अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले अबको वर्ष विकासको हुने बताउदै त्यसका लागि सबै मिलेर अगाडि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभयो ।
बाँकेका १० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
आजबाट हिउँदे अधिवेशन सरू
जानकी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा लोकबहादुर सुनार